Global Voices teny Malagasy » Noravàna ny antenimiera armeniàna mba hanomànana ny fifidianana amin’ny Jona · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 19 Mey 2021 13:25 GMT 1	 · Mpanoratra OC Media Nandika avylavitra
Sokajy: Fanoherana, Fifidianana, Mediam-bahoaka, Politika
Mehr News Agency  nampiasàna ny Wikimedia Commons, CC BY 4.0 
Ity lahatsoratra ity dia navoaka voalohany  tao amin'ny tranonkalan'ny OC Media. Dika nokiraina no averin'ny avoaka etoana ao anatin'ny fifanarahana iray hifampizara votoaty.
Rava tamin'ny 10 May ny antenimiera armeniàna taorian'ny tsy nahavitany nanendry tamin'ny fomba ofisialy izay ho solon'ny praiminisitra, ary manokatra ny làlana hanaovana fifidianana vaovao amin'ny Jona.
Ny 25 Aprily no nanao ny fihodinana faharoa sy dingana farany tamin'ny fifidianana izay ho praiminisitra ireo solontenam-bahoaka taorian'ny nametrahan'i Nikol Pashinyan fialàna. Ny fametrahana fialàna nataon'ny praiminisitra sy ny tsy nahavitan'ny antenimiera nanendry izay ho solony no fepetra nilaina mba hanaovana fifidianana mialoha ny fotoana.
Neken'i Pashinyan ny hitantana ny fifidianana rehefa vita ny fifanarahana nifanaovan'ny solontenan'ireo antoko roa avy amin'ny fanoherana, ny antoko Prosperous Armenia (Armenia Miroborobo) sy ny Bright Armenia parties (Armenia Mamiratra) sy ny solontenan'ny antenimiera.
Ny mpanohitra, na ny ao anatin'ny antenimiera na ny ety ivelany, dia niampanga an'i Pashinyan ho tsy nahay nitantana taloha, nandritra ary taorian'ny faharesean'ny firenena tamin'ilay Ady Fanindroany tao Nagorno-Karabakh. Taorian'ilay fifanarahana tamin'i Rosia nitarika ho amin'ny fampitsaharana ny ady, an'arivony maro ireo mpanao hetsipanoherana  no nivoaka an-dalambe nitaky ny hisintahan'i Pashinyan.
Taorian'ilay ady dia nisy fitontonganany ny laza nananan'i Pashinyan talohan'ny revôlisiôna, noho ireo fitetezana nataon'ny PM tany amin'ny faritra matetika niteraka fanoherana sy tsy fankasitrahana.
Na izany aza, ny fitsapana hevitra dia milaza fa i Pashinyan sy ny vondrona My Step misy azy hatreto no mbola malaza indrindra amin'ny hery politika ao amin'ny firenena.
Tao anaty fitsapankevitra nataon'ny Gallup International Armenia tamin'ny Aprily lasa iny, 27 isanjato no nilaza fa hifidy My Step, raha 32 isanjato izany iray volana talohan'io. Ny fiakarana ambony indrindra manaraka dia lasan'ny filoha faharoan'i Armenia, Robert Kocharyan, izay tafakatra 8 isanjato ny fanohanana azy. Tsy misy antoko hafa nihoatra ny 5% hahafahana miditra ao anatin'ny antenimiera, raha efa mila ho ny antsasany kosa no nanambara fa tsy hifidy na iza na iza.
Nampitandrina ny sasany avy amin'ny fanoherana fa tsy ho anaty tontolo malalaka sy tsy mitanila no hisian'ireo fifidianana mialoha ny fotoana.
Nandritra ny fivoriana manokana nataon'ny antenimiera tamin'ny 10 May, Pashinyan, izay nitazona ny toeran'ny praiminisitra vonjimaika, dia nanambara fa tsy ho azo eritreretina ny hisian'ny fanodinkodinana ny vokatr'ireo fifidianana vaovao satria “tsy hisy mihitsy olona hanaiky ny hanaovana hosoka amin'ny vokatra”
Ireo fifidianana nialoha ny fotoana natao tamin'ny 2018, ny voalohany natao taorian'ny nahatongavan'i Pashinyan teo amin'ny fahefana nandritra ny revôlisiôna am-pilaminana, no noheverina ho ny fifidianana nangarahara indrindra sy marina teo amin'ny tantaran'ny firenena taorian'ny nahazoany fahaleovantena.
Mikarakara famoriambahoaka ho an'ny fiverenany i Kocharyan
Ny 9 May, mpanohana an'aliny maro an'i Robert Kocharyan no nifamory tao Yerevan, toerana nanaovan'ilay filoha teo aloha fampanantenana fa “hamerina ny fandriampahalemana mendrika an'i Armenia.”
Famoriana olona nifanindran-dàlana  tamin'ny fety fanambaràna ny “Armenia Alliance” an'i Kocharyan, niarahana tamin'ny antoko “Armenian Revolutionary Federation (ARF)” – Federation Revôlisiônera Armeniàna – sy ny “Rebirth Armenia” – Fahateraham-baovao ao Armenia .
Fotoana farany nandraisan'i Kocharyan fitenenana ny tao amin'ilay famoriam-bahoaka nialoha ny fifidianana tamin'ny 2003. Nandritra ny kabariny ho an'ireo mpanohana tamin'ny 9 May, nilaza izy fa taorian'ny nandaozany ny toerany dia tsy nihevitra akory ny hevrina hanohy ny pôlitika indray andro any.
Nolazainy fa ny faharesena nahazo an'i Armenia tamin'ilay ady, ny olan'ny fandriampahalemana any amin'ny faritanin'i Syunik ao atsimon'i Armenia, ny zavatra manjo an'i Nagorno-Karabakh, ary ny fitontonganan'ny toekaren'i Armenia no nampiova hevitra azy.
Nomen'i Kocharyan tsiny ny governemanta noho ireo olana rehetra atrehan'ny firenena amin'izao fotoana izao ary nambarany fa saropady ho an'ireo antoko mpanohitra rehetra ny fanesorana azy.
Navoitran'i Kocharyan ihany koa ny tolotra iray nolaviny, nataon'ny filoha voalohany, Levon Ter-Petrosyan, mba hiraisan'ireo filoha telo fahiny hanohitra an'i Pashinyan. Nolazainy fa efa nivonona hiaraka hiasa amin-dry zareo izy hanaisotra an'i Pashinyan saingy tsy misy ilàna ny mifamatotra amin'izy ireo izany.
“Eny, sosokevitro ny hifanomezan'ny filoha voalohany sy ny fahatelo tànana amin'ny tolona atao amin'io governemanta io, tolona isanandro raha toa ry zareo vonona ny tolona , dia ho tafita isika. Ho fandresen'ny rehetra izany; Ho toy izao no ametrahako azy: iray amin'ireo teknika amin'izany tolona izany ny fametrahana fiaraha-mientana,” hoy i Kocharyan.
Hatramin'ny hahatongavan'i Pashinyan teo amin'ny fahefana, vesatra heloka bevava marobe no niandry an'i Kocharyan.
Tamin'ny Martsa lasa iny, namoaka didy ny Fitsaràna momba ny Lalam-panorenana fa tsy araka ny lalàm-panorenana ireo vesatra “fanonganam-panjakana araka ny lalàm-panorenana” anenjehana azy, ka tsy noraisana ilay raharaha.
Ny itazonana azy dia ny anjara noraisiny tamin'ilay famoretana namoizana aina tamin'ireo hetsipanoherana taorian'ny fifidianana tamin'ny Martsa 2008. Fanaparitahana mpanao fihetsiketsehana, izay nahitàna fandefasana tafika nameno ny arabe tao Erevan, nahafatesana olona folo.
Ampangaina ihany koa i Kocharyan tamin'ny nanekeny kolikoly mitetina 3 tapitrisa dolara eo ho eo; mbola amperiny izay fitsaràna  izay.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2021/05/19/152750/
 Mehr News Agency: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 navoaka voalohany: https://oc-media.org/armenian-parliament-dissolved-paving-way-for-june-elections/
 an'arivony maro ireo mpanao hetsipanoherana: https://globalvoices.org/2021/02/25/in-post-war-armenia-legislators-take-aim-at-press-freedom/
 namoaka didy : https://oc-media.org/armenias-top-court-dismisses-kocharyan-case-as-unconstitutional/